LibreCAD, Ugu dambayn waxaan leenahay CAD - Geofumadas lacag la'aan ah
LibreCAD ugu dambayntii waxaannu yeelanaynaa CAD a free
Janaayo, 2012 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, aragti ugu horeysay
Waxaan doonayaa inaan bilaabo markaan caddaynayo inaanay ahayn mid la mid ah CAD-da bilaashka ah ee CAD ah laakiin labadaba waxay ku jiraan raadinta ugu badan ee Google ee la xidhiidha CAD-da. Iyadoo ku xiran nooca isticmaalaha, sawirka aasaasiga ah ayaa ka fekeraya helitaanka helitaanka iyada oo aan la siin lacag bixinta ama jahawareerka burcad-badeednimada oo markaa uuna ugu yeeray CAD; user user sare ama horumariye u eegto LibreCAD xorriyadda ay leedahay si loo ballaariyo awooddeeda.
Waxaana dhawaan la sii daayay qaybtii ugu horreysay ee degaanka LibreCAD. Waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee aan rajo weyn ka qabno, waxaan aragnaa furanaansho furan oo ah qaab ganacsi oo jajabin doona falsafooyin badan oo ku saabsan habka loo yaqaan dimoqraadiyadda. In runta, beeraha kale sida dhufto ee daabacaadda internetka iyo GIS software lacag la'aan ah uu sameeyay horumar la taaban karo, oo ay ku jiraan garaacay qalab lahaansho la magac caan ah, laakiin CAD aasaasiga ah (ka baxsan Qase ayaa weyn laakiin design farsamo ) Illaa iyo hadda ma aragno wax badan.
Horumarka ayaa dib u isticmaalaya qaar ka mid ah Qad, kaas oo aan ka hadalnay muddo ka hor, inkastoo ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo ay sabab u tahay nooca shatiga iyo xuquuqda qaar, ayaa ku dhowaad dib loo dhisay xoqan, si yar oo ka faa'iideysanaya howlaha iyo qaar ka mid ah dadaalka uu qaatay intii mashruuca loo yaqaan "CADuntu.
Si kastaba ha ahaatee, weli wali waa qaabka aasaasiga ah, hase yeeshee, isbeddelka ay qaadato iyo aqbalaadda bulshada dhexdeeda, waxaan ku kalsoonahay in muddo seddex sano ah aan ugu dambeyn laheyn qalab CAD ah kaas oo ku tartamaya software la jecel yahay. Ilaa iyo inta ay ku dhex jirto nidaamka deegaanka dabiiciga ah, LibreCAD xitaa waxay xitaa ku guuleysan kartaa guulo ballaaran oo ka jira jawiga GIS maxaa yeelay waxyaabo badan oo wali loo baahan yahay in laga sameeyo dhinaca CAD ee qaabka xariiq / gawaarida
Waa maxay horumarinta LibreCAD
Hadda, isticmaalka LibreCAD waa wax aad u macquul ah. Naqshadeynta casriga ee user-ka waa wax aad u macquul ah, oo leh albaabbada la qabsi karo
Xakamaynta lakabyada waa wax aad u macquul ah, oo la mid ah sida ay ku jirto corelDraw ama MapInfo, oo leh off, kaliya hal guji. Gudaha hoose ee booska loogu talagalay qaabka loo yaqaan "AutoCAD style" inkastoo ikhtiyaarrada xaddidan ay ku yaalaan barxad siman oo noqon karta mid aan caadi aheyn ama meelna ku dhicin. Sawirada soo socda waxay muujinayaan waxa uu yahay interface QCad iyo sida ay isku midka yihiin ee lagu hayo LibreCAD.
Waxaan jecelahay macquulnimada socodka LibreCAD, ka fogaanshaha baararka badan oo isku xira shaqada. Guddiga bidixda ma ahan mid amar ah, laakiin wuxuu ka kooban yahay taliska amaanka, macaamiisha Microstation. Si aad u bixiso tusaale:
Dooro khadka taliska
Tani waxay keenaysaa calaamado lagu badalayo ikhtiyaarrada xariiqda (laga bilaabo laba dhibcood, laga bilaabo barta (raajada), raajo, dulqaad, iwm.)
Iyo marka aad doorato nooca xariiqa, SNAP
Sidoo kale guddi-kooxeedkan waxaad ku dhaqaajin kartaa cuntooyinka aan ka shaqeyneynin bararka sare, sida bedelidda amarrada, qiyaasidda, xulashada ama macluumaadka macluumaadka.
Sida iska cad waa macquul macquul ah, sababtoo ah shuruudo kale waxaad u dabbaalan kartaa shaashadda si aad u sameyso xariiq qashin gaar ah.
Sidoo kale waa wax aad u macquul ah, in sida Microstation, amarka la isticmaalo ma dhimanayo, haddii aan la isticmaalin.
Sidoo kale AutoCAD, waxay aqbashaa amarrada qoraalka, oo leh magacyo isku mid ah iyo gaaban. Tusaale, xariiq ayaa la qori karaa: Khadka, L, ln; Isbarbardhiga waa la qori karaa ama xitaa, xitaa, barbar socda.
Waa arrin aad u macquul ah, in aad ku habeysiin kartid luuqada labadaba interface iyo amarro, kuwaas oo lagu doorto Diiri> Doorashooyinka App.
Waxay leedahay auto-badbaadiyey, iyo waa la qorsheyn karaa mar kasta oo ay dhacdo.
Intooda ugu badan ee casriga ah ee LibreCAD waxay ku jiraan interface, inkasta oo ay jiraan waxyaabo xiiso leh, sida xulashada dhammaan walxaha ku jira lakabka, waxaanan dooneynaa inaan aragno haddii ay jiraan wax hormariyayaal ah. Oo in kastoo sidii xal free waa in dib-uhabeynta sida aanu wax u qabtaan, ayaa guud ahaan mudnaanta la siiyaa fari inta badan ay isticmaalaan barnaamijyada lahaansho, ka dibna loo diyaariyey barbardhigo ah taas oo ay jirto ayaa hadda ku saabsan oo aan la isticmaali karaa marka la siiyo Koorsada AutoCAD oo ku salaysan sawirada ugu badan ee 32 ee sawirrada dhismaha. Inkastoo ay jirto RC cusub, waxaan isticmaalayaa 1.0-ta ugu dambeysa ee deggan 15 2011 December.
1 Khadka Si Kumbuyuutarka furaha wuxuu u hawlgalaa fursadaha sida:
- Laga bilaabo laba dhibcood
-Ka bilaabo bilowga iyo xagal
- Khadka tooska ah, khadka tooska ah
- Khadka Bixiyaha
2 Polyline Si Xulashada amarku wuxuu kiciyaa fursadaha lagu hagaajinayo sharraxa "polyline" sida adoo ku daraya ama ka saaraya noodeyska ama xoqitaanka qaybaha.
3 Goobo Si - Xarunta bartamaha
- Xarunta raadiyaha
4 Xudduudda Maya Waxaa suurtagal ah in la sameeyo amarka kabadhada
5 block Si Tusmada waxaa ku jira sawirro loogu talagalay dib u habeynta, dib u samaynta, dib u habaynta, isugeynta, ama gelinta
6 Sameynta Maya
7 jar Si Waxaa sidoo kale jira ikhtiyaari trim ah laba xariiq oo, oo la mid ah wixii aan ku sameyno shaandhada shidaalka ee aan shidaalka lahayn.
8 Nuqul Si
9 Si aad u guurto Si Amarka wareegga wuxuu ku jiraa nuqulka iyo amarrada isbeddelka, isagoo calaamad u eg lumis loo yaqaan Waan raacayaa
10 Si aad u leexiso Si
11 Si aad u fuusho Si
13 Tafatir duldhigyada Si
14 loogana faa'iidaysto Si
16 qaansada Si -Center, dhibic, xaglaha.
17 Bambiyo Si Xarunta
19 Hollow Maya Ma jirto wax taageero ah oo ku saabsan walxaha adag ee walxaha leh
21 Si aad u kala bixiso Si
22 Break Si Amarkan waxaa loo yaqaannaa kala qaybinta, qayb ka mid ah xariiqda meel gaar ah
23 Multiline Maya
24 Xline Maya
26 Block Block Si
27 Qoraalka Si Waxaad ku qori kartaa qoraalka waraaqaha, aad u macquul ah guddiga sifooyinka qoraalka iyo gelinta calaamadaha caadiga ah sida dhexroorka, heerka, iwm.
28 Is barbardhig Si
29 La sii wado Maya Sida muuqata waxaa la samayn karaa iyadoo la mariyo ama laba xabbadood
30 Dheeraad ah Si
32 Tirtir Si Waxaa jira farqi ah amarrada u dhexeeya tirtiridda iyo tirtiridda walxaha la soo xulay
Ma doonayo inaan ka hadlo xuduudaha, maaddaama mashruucu weli yahay hindise.
Wixii mashiinka ah waa mid gaabis ah waxaana jira waxyaabo badan oo ka maqan moodada labadaba marka xulashada walxaha iyo badhanka midigta. Fursadaha saafiga ah waa kuwo aad u yaryar ama aan ka yareyn laakiin la qabsashadeynta ayaa weli ah mid liita. Kaliya waxay taageertaa shaqada 2D, xilliga gaaban waxaa hubaal ah inay hirgelin doonto ismuunikada sida uu sameeyay qCAD. Ma jiraan wax xakameynaya qaababka, kuwa hadda jira ee sawirka waxaa loo arkaa inay yihiin walxo la geliyay faylka inkastoo aan la arki karin, daabacadu waa mid sabool ah.
Sida iska cad, sababtoo ah cusub, weli ma jirto buug gacmeed.
Waxay sidoo kale taageertaa faylalka dxf ee qaababka 2000, ka dibna waxaan rajeyneynaa dwg2000.
Waxay sii kori doontaa ilaa inta ay mudnaanta siinayaan liiska rabitaanka, bulshada wuxuu ciyaari doonaa door wanaagsan.
Caqabadda ugu weyn ee LibreCAD
Si daacadnimo ah, ma eegayo dhibaatooyinka helitaanka interface dhamaystiran iyo isticmaalka wanaagsan ee khayraadka kombiyuutarka.
Fikradayda, caqabadda ugu weyni waxay tahay in ay maamusho faylasha dwg / dgn. In kastoo ku dhowaadba barnaamij kasta oo hooseeya, sida kuwa ku jira line-ka IntelliCAD, Globalmapper, TatukGIS samee, barnaamijyo aad u qoto dheer sida QGIS y GvSIG Waxay awoodi waayeen inay albaabka u furaan heshiis. Waxay u muuqataa in albaabadu aanay had iyo jeer furanayn dadaallada lacag la'aanta ah. Xaaladda Bentley Systems, isku dayga waa in la sameeyaa iyadoo loo marayo Alliance Design Alliance iyo wax ka qabashada qaabka V8 iyo I-model in aynu rumaysan nahay inay noqon doonto 10 sanado badan, marka laga hadlayo AutoCAD waa mid aad u adag sababtoo ah ka dib markii qof walba uu furay (dwg2000) waxaa jira ugu yaraan afar nooc oo cusub oo ay ku jiraan mid AutoCAD 2013.
Waxa kale oo caqabad ku ah in aad ka fikirto scalability, tan maanta dulinka hadlaya waa huriye, mustaqbalka CAD waa in Qaabaynta (BIM), iyo LibreCAD arrintani ku yeelanayso rar culus haddii ay nala noqoto in tabarucaadka ugu waa ikhtiyaari .
Caqabadda kale waa sii jiritaan, taas oo hubaal ahaan u heli doonta iyada oo ah mid caalami ah.
Hadda waxaan helay aragti wanaagsan, oo aan ka ahayn barnaamijka oo la fulin karo oo kaliya 12 MB.
Soo qaado LibreCAD
Post Previous«Previous Dhalinta faahfaahinta waxay Dhagri CivilCAD
Post Next Burcad-badeednimada Barnaamijka, mawduuc aan dhammaad lahaynNext »
4 Jawaab "LibreCAD, Ugu dambeyntii waxaan helaynaa CAD lacag la'aan ah"
waxaad leedahay khaladaad khatar ah markaad isku dayeyso inaad kala qaybiso goobo u dhexeeya laba xariiq maadama ay ku jiraan barashada qulqulka youtube. Anigu awood uma lihin waxaan haystaa saacado badan. Miyuu khiyaameeyaan fiidiyaha? Barnaamijkee ma? Ma i caawin kartaa? t
Celti isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay tabaruc aad u wanaagsan, maadaama aan ahay ku cusub tan waxaan dhihi karaa interfaceku waa mid dareen leh, waxaan rajeynayaa in buugaagta ku jira degg la soo dejisan karo isla markaana la soo bandhigi karo dhowaan.
Monchito Ponce isagu wuxuu leeyahay:
Ciise isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan arkaa in ay u ogolaato soo rogista shaandhooyinka shaati-baarista, inkastoo aanan awoodin inaan arko walxaha laga soo qaaday baaritaanyada aan sameeyay.